FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA PAPASTZU - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Papastzu
Papillon / Shih Tzu Alika mifangaro
Juliet the Papastzu (Papillon / Shih Tzu mix) amin'ny 1 taona— 'Juliet no fahazavana eo amin'ny fiainana. Tiany ny olona ary mankahala irery. Tena tia milalao izy ary tia any ivelany, kanefa toa mirenireny ihany koa raha tsy voatazona amin'ny faritra voafefy na amin'ny fehy. Milanja kely mihoatra ny 6 lbs izy. '
Ny Papastzu, antsoina koa hoe Papi Tzu, dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny lolo ary ny Shih Tzu . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
afangaro chow chow pitbull amidy
American Canine Hybrid Club = Papastzu
Registra ny famolavolana endrika = Papastzu
Designer Dogs Kennel Club = Ori-Pei x Pug = Papastzu
Mpanoratra International Canine Registry®= Papastzu
Lulu the Papastzu (Papillon / Shih Tzu mix) eo amin'ny 1 taona mandry eo am-pandriany miaraka amina vavony mena ao am-bavany.
Pressley the Papi Tzu dia ½ Shih Tzu sy ½ Papillon. Hoy ny tompony: 'Fifaliana fotsiny izy! Amin'ity sary ity dia 8½ herinandro izy ary milanja 1,8 pounds. '
'Toast the Papi Tzu puppy at 3 months old is a Papillon / Shih Tzu mix.'
'I Gumbo the Papi Tzu puppy amin'ny 3 volana ity. Tamin'ny 6 volana dia nilanja 4,5 lbs izy. Izy dia fehezam-pifaliana. Tsy dia mivovo be mihitsy izy ary be fitiavana. Afaka mitsambikina toa a Papillion , fa manana ny tongony fohy kokoa an'ny a Shih-Tzu . Izay mahita azy dia manontany ahy foana hoe karazana alika inona izy satria mahafatifaty be. Tiako i Gumbo keliko. '
Gumbo the Papi Tzu dia nihalehibe tamin'ny faha-8 taonany— 'Lbs 5,5 feno izy. I Gumbo no alika tiana indrindra! Tia azy ny olona rehetra ary te hitondra azy mody foana! '
'Brutus sy Maximus, ny Papi Tzus roa — Maximus dia fifangaroan'ny Papillon / Shih Tzu, ary i Brutus dia mifangaro Papillon / Shih Tzu kely. Ity sary ity dia an'i Brutus amin'ny 4 volana ary Maximus ao anatin'ny 1 taona. Ankizilahy kely mahafatifaty sy mahafinaritra izy ireo. Maximus dia tia mitsako ba kiraro ary tia mijery eo am-baravarankely. Tian'i Brutus ny manaraka an'i Max manodidina ary manao izay rehetra ataon'ny zokiny lahy. '
'Betsy dia Shih Tzu niampita tamin'ny Papillon. Ny reniny no JEREO NY ary ny rainy dia ny Pap . Izy dia aseho eto amin'ny 6 volana eo ho eo, ary alika mahafinaritra tokoa. Mankato izy, malemy paika, mamy, falifaly, mahery fo, fa be fitiavana. Betsy hatramin'ny andro voalohany dia tsara toy ny volamena. Izay dia voafetra trano ao anatin'ny andro vitsivitsy voalohany. Tsy mbola nanao izany izy mitsako izay voarara ary raha fony izy mbola kely dia naka izay tsy navela, ny minitra nahitanao azy dia nilatsaka !! Efa 4 volana izao no nisy an'i Betsy taminay ary tsy mbola nitoloko izy !! Ny alika malina indrindra fantatro. '
Betsy the Shih Tzu / Papillon dia afangaro ho alika kely 2 volana ao anaty ahitra
'Ity i Luci, zanako mifangaro Shih-Tzu / Papillon 6 taona. Alika mahafinaritra i Luci, tsy manam-paharoa: Ao an-trano izy tena faly , manaitra ny feo azo atao rehetra. Ankoatr'izay, tia ny olon-drehetra izy ary tia azy ny olon-drehetra. Tiany ny mandeha mandeha lavitra ary mianatra mankanesa amin'ny alika hafa , na dia aleony aza miditra am-pofoan'ny olona . '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Papastzu
Sary Papastzu 1
Lisitry ny alika mitambatra Papillon
sinoa mainty sy fotsy sinoa
Labrador retriever alika karazany Info
beagle sy border collie mix
shar pei afangaro amin'ny voromahery